स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ रहेको जनाएको छ ।
आइतवार नियमित पत्रकार ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पोखरा महानगरपालिकाका ६२ वर्षीय पुरुष र वीरगंज महानागर्पालिकाकी २० वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको बताएका हुन् ।
नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७५ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ८० जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ ।
आइतवार नियमित पत्रकार ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ५ सय १५ को पीसीआर परीक्षण भएकोमा ३ सय ८० संक्रमित फेला परेको जनाएका हुन् ।
यससँगै नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ५ सय ४४ रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा जम्मा ४० जना संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या १६ हजार ३ सय ५३ रहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा ५ सय ११, प्रदेश २ मा ३ हजार ७५, वागमती प्रदेशमा ११ सय ३२, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ३७, प्रदेश ५ मा ४ सय ४६, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७४मा सक्रिय संक्रमण देखिएको छ ।
डा. गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा ९२ जना संक्रमित थपिएको बताए । काठमाडौँ जिल्लामा ९० र ललितपुरमा २ जना संक्रमित थपिएका हुन् ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले आन्तरिक र बाह्य हवाई उडान तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात तत्काल नखोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा केन्द्रको बैठक आइतबार साँझ बसेकोमा मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको हो।
साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई उडान, लामो दूरीका यातायात र विद्यालय भर्ना भदौ १ गतेबाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि सीसीएमसीले ती सेवा भदौ १ गतेबाट नखोल्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको हो।
सीसीएसीको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेमा निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। मन्त्रिपरिषदको बैठक भोलि सोमबार बस्दैछ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हवाई उडान खोल्ने परिस्थिति बनिनसकेको र सीसीएमसीको सिफारिसमा सरकारले थप निर्णय गर्ने बताएका थिए।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना नहुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सीसीएमसीको आइतबार साँझ बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका धेरै जिल्लामा संक्रमण बढेको बारे स्थिति विश्लेषण गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले लक्षण भएका बिरामी र मृत्यु बढिरहेकाले सबैले सुरक्षित भएर बढनु पर्ने अवस्था रहेको बताए।
स्वास्थ्य प्रोटकको पालना नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको सीसीएमसीले जीवन रक्षाका लागि बुद्ध, बालबालिका र अत्यावश्यक काम नभएकाहरुलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।
अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कन परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न, साबुनपानीले हात धुन र भौतिक दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ।
संक्रमित बढेसँगै आइसोलेसन बेडको आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने निस्कर्ष निकालिएको छ।
आइतबारको बैठकले स्थिति विश्लेषण गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का लागि सिफारिसको कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।